7 ku dhimatay dagaalka Beledweyne - BBC Somali
7 ku dhimatay dagaalka Beledweyne
13 Disembar 2015
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya in dagaal uu ka dhacay magaalada, kaasi oo geystay khasaaro naf iyo maalba leh.
Dagaalka, ayaa saakay arroortii ka bilowday xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne, waxaana ku dagaalamaya maleeshiyo beeleedyo abaabulan oo hub kala duwan adeegsanaya. Ugu yaraan 7, ayaa ku dhimatay 20 kalena waa ay ku dhawacmeen.
Goobjoogayaal, ayaa BBC-da u sheegay inay arkeen meydadka iyo dhaawaca maleeshiyada dagaalameysay iyo dad rayid ah.
Dagaalkan, ayaa daba socda dagaal ay odayaasha dhaqanka horay xal uga gaareen oo galbeedka Beledweyne ku dhexmaray beelo wada dega galbeedka magaalada, wuxuuna salka ku hayaa dilal horay u dhacay. Iskuulada iyo suuqyada, ayaa xirnaa, waxaana aad u yaraa socodka dadka.